Umzi-mveliso wokwakha izihlunu - China Abavelisi bokwakha izihlunu, abaXhasi
Umzimba ophathekayo ukrola izihlunu ems tesla umatshini wokukrola
Umgaqo wokuSebenza esi sisixhobo sobuhle semisipha sisebenzisa itekhnoloji engeyiyo eyokuhlasela yobushushu obuphezulu obugxile kumandla okukhupha amandla ashukumisayo amandla ashukumayo ngokusebenzisa izibambo zonyango ezimbini ezinkulu ukungena kwimisipha kubunzulu be-8cm, kunye nokwenza ukunyuka okuqhubekayo kunye nokuncipha kwezihlunu ukufezekisa uqeqesho oluphezulu kakhulu, ukomeleza ukukhula kwe-myofibrils kunye nokuvelisa amatyathanga amatsha e-collagen kunye nemicu yemisipha, ngaloo ndlela uqeqesho kunye nokunyusa ukuxinana kwemisipha kunye ne-v ...
Ubuninzi obuPhathekayo obuPhezulu beTeslasculpt Hi-Emt Body Muscle Stimulation ems sculpt Machine
Yintoni i-EMS SCULPT? Idesika entsha ye-EMS scuplt Body slimming High Intulsed Electromagnetic (HIPEM) yetekhnoloji yokunciphisa umzimba, ukuqinisa kunye nokutsha kwamafutha. Isixhobo sobuchwephesha sobuhle bokulungisa kunye noogqirha abafuna ukunika abathengi babo okona kuhlaziyiweyo kunye nonyango olusebenzayo olungangenisi unyango lomzimba EMScuplt Ukuncipha komzimba kwakha izihlunu kwaye kutshise amanqatha ngaxeshanye. Iimpompo ze-Electromagnetic zenza ukuba imisipha ye-supramaximal contractions inyanzelise izicubu zemisipha ukuba ziqhelane, ...
2021 Izixhobo eziShukumayo eziSebenzayo zaMva nje
Ingaba isebenza kanjani? Ukuchaphazela ngokuzithandela kunokunyusa imfuno yamandla kwiiseli ezinamafutha. Kukhutshwa i-epinephrine ebonisa iiseli ezinamafutha ukuqala i-lipolysis. Ukuncipha okumandla okuphezulu kukonyusa ukukhutshwa kwe-adrenaline Trigger Cascade effect ekhokelela kwiiseli eziphezulu ze-lipolysis Fat. Ukugcwala kwamafutha acid asimahla (i-FFAs) kubangela ukungasebenzi kakuhle kweseli kunye nokungeniswa kwe-apoptosis- inkqubo yokufa kweseli. Iiseli ezifileyo ziyawa kwaye ziyagungxulwa ngokwemvelo. Ukunyanzeliswa okuphezulu kakhulu ...
Kuvunyiwe i-4 yeeNtloko eziSebenzayo zoMzimba woKwakha iziQinisekiso zoMatshini we-Emslim
Isiphatho sonyango Esiphathwayo Indawo yokusetyenziswa okucetyiswayo Iingalo, amathanga, amathole Isisu, iimpundu, amathanga Indlela eyahlukileyo: Inkqubo yonyango 1. Amaxesha ama-2-3 ngeveki, amaxesha ama-4-6 njengekhosi yonyango. 2. Iikhosi zonyango ezi-4-6 zezona zilungileyo. Kuxhomekeka kwimeko yomthengi ngokwasemzimbeni, abatyebe kakhulu okanye abathengi bexesha elide abangazisebenzisiyo banokonyusa ikhosi yonyango. 3. Iziphumo ezingcono ziiveki ezi-2-4 emva konyango. Abanye abantu baya kuziva izihlunu eziqinileyo emva nje kokugqiba i-4 ...
I-Hi-Emt iintloko ezi-4 ze-EMS zomzimba womatshini wemisipha yobuhle
Izibonelelo ezine iintloko zeentambo ezi-4 zoqeqesho lomzimba wonke 49500amaxesha khama umsipha ngemizuzu engama-30H 100HZ high frequency 7 Telsa high power Magshape Machine intshayelelo Inkcazo ye-Electromagnetic wave (Amandla) 0-7tesla Amandla okuphuma 4300W Ubuninzi beF1: 1-10Hz F2: 1-100Hz Ububanzi bePulse 300us I-Voltage AC220V ± 10% 50Hz AC110V ± 10% 60Hz imowudi yenkqubo Imowudi yezemidlalo Imowudi yobumnene Iscreen se-12 intshi 16: 9 ...
I-4 iphatha umatshini wokwakha izihlunu ze-magshape
IMagshape sisixhobo esisebenzayo semilo kunye nesixhobo sokwakha imisipha. Kufanelekile ukuba unciphise umzimba, ubumbe, ufumane izihlunu, uchithe amanqatha, usebenzise imithambo yevesti kwaye uphakamise inyonga，ilungile empilweni.
Umatshini we-Ems we-Wholesale Muscle Sculpt Burn Fat Ems Umatshini wokukrola
Ukusetyenziswa komatshini we-ems iMagshape inokuqinisa ikhonkco ukomeleza izihlunu ezingundoqo, kubandakanya izihlunu zesisu zesisu esikhulu semisipha (imisipha yesisu esiswini, umsipha wangaphandle oblique, umsipha wangaphakathi we-oblique, umsipha wesisu ojikelezayo) kunye ne-gluteus maximus kwimisipha encinci . Imisipha engundoqo inokukhusela umqolo, Gcina ukuzinza komboko, ukugcina ukuma ngokuchanekileyo, ukuphucula amandla okuhamba kunye nokunciphisa amathuba okonzakala, ukubonelela ngenkxaso yolwakhiwo ...
EMSCULPT yokwakha izihlunu kunye noMatshini wokunciphisa umzimba
Ukusetyenziswa kwe-HI-EMT: Uluhlu oluthile lwee-frequencies ezingavumeli ukuba umsipha uphumle phakathi kwezinto ezilandelanayo,
Ukunyanzeliswa kwemisipha kwenzeka xa izihlunu zemisipha ziphindaphindwa
kutyhilwe kwezi meko zomthwalo uphakamileyo.
Izifundo zibonise ukuba ubukhulu besisu esiswini bonyuka nge-avareji ye-15-16% ukuya kwiinyanga ezimbini emva konyango nge-HI-EMT.
Ulwakhiwo lwezihlunu Ukutshisa umatshini wemagshape
GXILA KWIMEKO YOMZIMBA NOKWAKHIWA KWEEMISipha
IMagshape sisixhobo esisebenzayo semilo kunye nesixhobo sokwakha imisipha. Kufanelekile ukuba unciphise umzimba, ubumbe, ufumane izihlunu, uchithe amanqatha, usebenzise imithambo yevesti kwaye uphakamise inyonga, ilungele impilo.
Kusebenza ngokukodwa kwiimpundu kunye nesisu. Isebenzisa itekhnoloji yentsimi ye-elektroniki egxile kakhulu (HIFEM) ukwenza ityhubhu yexesha elincinci yokuqina kwemisipha, kukhokelela
ukwanda koxinano lwemisipha, ukunciphisa ivolumu, ukucaca okuphuculweyo kunye nokuphucula ithoni.
Yiyo kuphela indlela yokunceda abasetyhini kunye namadoda ukuba bakhe izihlunu kwaye batshise amanqatha, kwaye yeyona ndlela yokuqala engangenisi moya yokunyusa isinqe.
Umatshini Wokwakha Isihlunu se-EMSculpt
GXILA KWIMEKO YOMZIMBA, UKWAKHIWA KWEEMPAHLA NOKUPHELISA ubunzima
Umatshini wokwakha wezihlunu ophathwayo we-EM
IMagshape EM-sculpt HIFEM yomatshini wokwakha izihlunu
Kusebenza ngokukodwa kwiimpundu kunye nesisu. Isebenzisa ubuchwephesha obuphezulu obujolise kwi-electromagnetic (HIFEM) yetekhnoloji yentsimi ukunyusa ukugqabhuka kwexesha elincinci lokuqina kwemisipha, okukhokelela ekwandeni koxinano lwemisipha, ukunciphisa ivolumu, ukucaca okuphuculweyo kunye nokuphucula ithoni.
Ubuhle be-CO2 Laser, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele, Ukususwa kwamabala amabala, Umatshini weLaser we-Co2, Shr IPL Khetha, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems,